प्रश्नः केही मानिसहरु यो भन्छन् कि ईश्वर हामीभित्र नै छन् र यस परिणाममा पुग्छन् कि हामी नै ईश्वर हौँ । “अहम्मः ब्रहम्म” अर्थात म नै ईश्वर हुँ। र यो पनि भन्छन् कि हरेक कुरा ईश्वर कै अंश हो, के यो सही हो?
उत्तर: यस्तो भन्नु सही होइन । ईश्वर हामीमा छन् र ईश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध छ भन्नु छुट्टा–छुट्टै कुरा हो (अर्थात यी दुबै भनाईमा ठूलो अन्तर छ) । बरु यस्तो भन्नु नै उत्तम हुन्छ कि हामी सबै ईश्वरका भक्त हौँ र उसकै नियम–कानुन पालन गर्छौँ ।
“हामीभित्रै ईश्वर छन्” भन्ने अवधारणालाई केही मानिसहरु आदम (अलैै.) को इतिहासबाट साबित गर्नेप्रयास गर्छन् कि अल्लाहले आदम (अलै.) भित्र आफ्नो रुह (आत्मा) फुंके । तर यस अवधारणामा अत्यन्तै खतरा छ, हामी भित्र ईश्वर छन् भन्ने कुराको दाबी गर्नुले हामीलाई अहङ्कार र घमण्डमा डोर्याउँछ कि हामी नै ईश्वर हौँ । मिश्रका राजा फिरओन र मध्य एसियाका राजा नमरुद जस्ता पछिका कैयौँ राजाहरुले आफ्नो बारेमा म नै ईश्वर हुं भनेर दाबी गरे । यस्ता दाबी गर्नेहरु असंख्य छन् । जब यिनीहरु मरे वा मारिए तब सबैले भन्न थाले कि ईश्वर मरे वा मारिए । अब प्रश्न यो उठ्छ कि के मर्ने वा हत्या गरिनेहरु ईश्वर हुन सक्छन् ?
हामीभित्र ईश्वर छन् भन्ने अवधारणा सही होइन किनभने ईश्वरको शक्ति अनन्त छ । के अनन्त शक्ति राख्ने ईश्वर सीमित शक्ति भएका मानिसभित्र अटाउँन सक्छन् त ? र यस्तो शक्ति जसलाई न त रोगले छुनसक्छ र न बूढो नै हुनेछ, के त्यो शक्ति यस्तो मानवीय शरीरमा वास गर्न सक्छ जसलाई रोग पनि लाग्छ, बुढेसकाल पनि आउँछ र विभिन्न पीडाहरु भोग्न विवश पनि हुन्छ । जुन पालनकर्तालाई मृत्यु नै आउदैन, त्यो मर्ने व्यक्तिमा कसरी वास गर्न सक्छन् । यसकारण यहीभन्नु सत्य हुन्छ कि हामी ईश्वरका भक्त हौँ र उनकै कानुनको पालना गर्छौँ ।
जुन व्यक्तिहरु यो आस्था राख्छन कि हाम्रो सृष्टिकर्ता एउटै छन्, उनी नै हाम्रो संरक्षक हुन्, उनले नै हामीलाई मुत्यु दिन्छन् र उनले नै कयामतको दिन फेरि जिवीत पारी प्रतिफल र सजाय दिनेछन् । उनीले यो कुरा मान्नुपर्छ कि सृष्टि र सृष्टिकर्ता बेग्ला–बेग्लै हुन् । सृष्टिकर्ता कहिल्यै पनि आफ्नो सृष्टिमा वास गर्नसक्दैनन् ।
हामी त्यो (ईश्वर) होइनौँ (We Are Not He) हामी उसकै हौँ (We are His)
जुन व्यक्तिहरु यो भन्छन् कि हामीभित्र ईश्वर छन् वा हामी नै ईश्वर हौँ तिनीहरु अल्लाहले निर्धारित गरेका कानुनविरुद्ध कदापी जीवनयापन गर्न सक्दैनन् । किनभने जन्म, बाल्यावस्था, अंगहरुको विकाश, कमजोरी, अंगहरुको बनावट र यौनइच्छाबाट सन्तानको जन्म, रोग, बुढेसकाल र मृत्युविरुद्ध कोही जीवन बिताउन सक्दैन । त्यसैले ईश्वरको नियमलाई पालना गर्नेहरु यो भन्न सक्दैनन् कि ईश्वर हामीभित्र छन् वा हामी नै ईश्वर हौँ ।
अब यो प्रश्न उठ्छ कि जब मानिस ईश्वर होइन र न मानिसभित्र ईश्वर छन् भने के ईश्वर मानिस भन्दा टाढा छन् ? कुरआनले यसको निकै उत्तमजवाफ दिन्छ–“(हे सन्देष्टा !) र जब मेरा भक्तहरू मेरो विषयमा तिमीलाई सोध्छन्, (भनिदेऊ)– “म नजिकै छु र पुकार्नेवालाले मलाई पुकारेमा उसको पुकार स्वीकार गर्छु । अतः उनीहरूले मेरो पुकारको उत्तर दिऊन् र मप्रति आस्था राखून् ताकि उनीहरूले सत्मार्ग पाउन सकून् ।” (सूरह २ः१८६)
“र निस्सन्देह हामीले मानिसको सृष्टि गरेका छौं र त्यसको मनमा उत्पन्न हुने विचारहरूलाई पनि हामी जान्दछौं । र, हामी त्यसको गर्धनको नशाभन्दा पनि निकट रहेका छौं ।” (सूरह ५०ः १६)
“र, हामी तिमीहरूको तुलनामा त्यस व्यक्तिको बढी निकट हुन्छौं तर तिमीहरू (हामीलाई) देख्न सक्दैनौ ।” (कुरआन ५६ः८५)
यो कुरा कति राम्रो र उत्तम छ कि अल्लाह हामीसँग नजिक छन् यस कुराको दाँजोमा कि म नै ईश्वर हुँ अथवा मभित्र ईश्वर छन् ।
कुरआनको नेपाली अनुवाद सुन्न चाहनु हुन्छ क्लिक गर्नुहोस .
Greetings! Very useful advice in this particular article! It is the little changes that make the greatest changes. Thanks for sharing! Daryl Gayle Landbert